Warshad Unugga Soo Saarida Qaboojiyaha Tamarta & Tamarta cusub iyo soo saarayaasha | SONGZ
Taxanaha SE waa nooc ka mid ah qaboojiyaha gawaarida korontada ku shaqeeya ee buuxa minivan, faan ama gaari xamuul ah oo loo isticmaali jiray gaadiidka masaafada gaaban ama dhexe.
Faahfaahinta Farsamada ee Truck Qaboojiyaha Taxanaha SE:
Awood ku habboon Gawaarida DC300V≤≤DC700V AC koronto AC220V Gawaarida DC300V≤≤DC700V AC koronto AC220V Gawaarida DC300V≤≤DC700V heeganka korantada AC380V / AC220V Gawaarida DC300V≤≤DC700V heeganka korantada AC380V / AC220V
Heerkulka la adeegsan karo （℃） -25 ～ 20 -25 ～ 20 -25 ～ 20 -25 ～ 20
Mugga la adeegsan karo （m3） 5 ～ 8 6 ～ 10 12 ～ 18 14 ～ 22
Mugga la adeegsan karo -18 ℃ （m3） 6 8 16 18
Awood Qaboojinta （W）
Nooca rotor-ka oo si buuxda uxiran
Nooca rotor-ka oo si buuxda uxiran (beddelka soo noqnoqda DC)
Danab AC220V / 3 ～ / 50Hz AC220V / 3 ～ / 50Hz AC220V / 3 ～ / 50Hz AC220V / 3 ～ / 50Hz
Uumi-bixiye Qiyaasta Hawada （m3 / h） 900 1800 1800 1800
Qaboojiyaha R404A R404A R404A R404A
Cadadka Lacagta （kg） 1.1 1.2 1.5 1.5
Awood （W） 1600 1700 2800 3500
Rakibaadda Qaybaha kala jaban ee saqafka
Qaybta isku dhafan ee hore
Cabbirka Evaporator-ka （mm） 610 * 515 * 160 1291 * 1172 * 265 1400 * 1152 * 482 1530 * 735 * 675
Cabbirka Cabbirka （mm） 1250 * 920 * 220
SE200 - T Macluumaadka Farsamada SE250 Macluumaadka Farsamada SE400 Macluumaadka Farsamada
1. Awoodda qaboojinta oo lagu calaamadeeyay heerka qaranka Shiinaha ee GB / T21145-2007 heerkulka heerkulka 37.8℃.
2. Codsiga mugga jirka gawaarida waa tixraac kaliya. Qiyaasta dhabta ah ee arjiga waxay laxiriiraa qalabka xamuulka kuleylka ee kuleylka jirka, heerkulka iyo xamuulka xamuulka ah.
Hordhac Faahfaahsan Hordhaca Taxanaha SE
1. Hal-ku-wada-jirka: Unugyada isjiidka ah ee Hilibka ku habboon in lagu raro alaabo badan ayaa loo adeegsanayaa aad iyo aad u badan, kuwaas oo u baahan naqshad aad u kooban oo ku habboon iyo dayactir ku habboon.
2. Tignoolajiyada ka-dhalashada iyo is-nadiifinta: gaadiidka xamuulku waxay soo saaraan tiro badan oo bakteeriyo ah. Unugga leh UV iyo ozone sterilizer-ka ayaa nadiifin kara jeermisna ku dari kara dhammaan gawaarida si looga fogaado walxaha waxyeelada leh ee haraaga ah loona ilaaliyo badbaadada cuntada. Isla mar ahaantaana, habab nadaafadeed oo gaar ah ayaa loo isticmaalaa in uumiyuhu iskiis isu adkeeyo. Barafku keligiis ayaa dhalaaliya, isaga oo maydhaya wasakhda dusha sare ee uumi-baxayaasha, isaga oo uumi-hayaha u ah mid nadiif ah oo aan ur lahayn.
3. Teknolojiyada kormeerka fog: Terminalka macmiilka, soo saarida gawaarida qaboojiyaha, iyo soosaarayaasha unugyada qaboojiyaha waxay sameysmayaan gebi ahaanba dabiiciyan internetka dhexdiisa, waxay hagaajinayaan heerka tayada iyo adeega ee qeybta, waxayna u abuurayaan qiimo weyn macaamiisha.
4. Tikniyoolajiyada soo noqoshada soo noqnoqda DC: waxay korsataa sine mowjadda buuxda ee tiknoolajiyada beddelaadda DC-ka si loo xakameeyo, waxtarka kombaresarada waxaa lagu kordhiyay in ka badan 30% marka la barbar dhigo guud ahaan kombaresaradayaasha joogtada ah ee AC, iyadoo la hubinayo masaafada gaariga.
5. Horumarinta R404A DC kombaresarada inverter
Ku tiirsanaanta awoodda farsamo ee Songz, waxay soo saartay kombaresarada DC inverter ah oo lagu dabaqay R404A gaar ah oo dhexdhexaad ah oo ka shaqeeya qaboojiyaha, kaas oo xaqiijin kara shuruudaha qaboojinta degdegga ah isla markaana lagu gaari karo ujeedada waxtarka sare, keydinta tamarta iyo xakamaynta heerkulka saxda ah.
Waqtiga xaadirka ah, unugyada qaboojiyaha korontada ku shaqeeya ee warshadaha dhammaantood waxay isticmaalaan kombaresarayaasha soo noqnoqda ee AC. Qorshahani wuxuu leeyahay adeegsiga tamarta sare, isbedbedelka heerkulka ballaaran ee qeybta, mana buuxin karo shuruudaha ilaalinta.
6. Marawaxada aan burushka lahayn: Nolosha adeeg ee buraashka taageere ayaa laga kordhiyay dhowr kun oo saacadood ilaa in ka badan 40,000 saacadood, waxtarka taageereyaasha waxaa lagu kordhiyay in ka badan 20%, iyo keydinta tamarta iyo waxtarka dhaqaale ayaa si weyn loo hagaajiyay. Codsiga xakamaynta isbeddelka joogtada ah, oo leh dareeraha cadaadiska iyo dareeraha heerkulka si loo gaaro hagaajinta nidaamka.
7. Horumarinta saddex-hal-koontaroole
Isku-darka kuwa beddelaya AC / DC-DC ee jira, beddelayaasha soo noqnoqda, iyo kuwa xakamaynta qaybaha kala duwan, la wadaaga qaybaha waxqabadka ee gudaha, iyo naqshadeynta saddex-hal-xakameeye oo leh nabadgelyo sare, heer sare oo ilaalin ah (IP67), cabir yar, iyo hawl-qabad hore . EMC waxay buuxin kartaa shuruudaha GB / T 18655 CLASS 3, oo waxay xaqiijin kartaa la xiriirka dhamaan baska CAN gawaarida, oo leh howl kormeer fog ah.
8. Naqshadeynta amniga sare
Nalalka seddex-geesoodka ah: Aasaaska, kaaliyaha iyo xoojinta ningax
Ilaalinta software: Xilliga-xad-dhaafka ah, korantada-korantada, hoos-u-dhaca iyo wejiga-luminta ilaalinta otomaatiga ah
Ilaalinta danab sare ee laba-geesoodka ah: Qalabka korantada sare & qalabka gargaarka cadaadiska sarreeya
Naqshadeynta ka-hortagga dabka: Qalab casri ah oo dabka ka horreeya, naqshad ka-hor-tag ah oo loogu talagalay koranto togan iyo taban
Kiisaska Codsiga ee Qaybta Qaboojiyaha ee Qaybta SE Taxanaha:
Hore: Qaybta Qaboojiyaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Hore
Xiga: Qaybta Qaboojiyaha Gawaarida Gawaarida iswada
toos baabuur wadista qaboojiyaha
gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida tooska ah
Qaybta heeganka korantada
Qaboojiyaha Gawaarida Xamuulka ah
Refrgieration Hilibka Tailer
Unuga Refrgieration Hilibka Tailer
Qaybta Tixraaca Minivan
Qaybta Qaboojiyaha Gawaarida
Qaybta Qaboojiyaha Van
Qaboojiyaha Mini iyo Midi City Bus ama T ...
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida ee Hore ...